MEGA အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
5.1.1 (411) for Android
ဒေါင်းလုပ် APK（95.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
Mega သည်အသုံးပြုသူထိန်းချုပ်ထားသောစာဝှက်ထားတဲ့ cloud သိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးလက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အထူးပလီတိုအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အတူပုံမှန်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများမှတဆင့်ချက်တင်ပေးသည်။ အခြား Cloud Storage ပံ့ပိုးသူများနှင့်မတူဘဲသင်၏အချက်အလက်များကိုသင်၏0န်ဆောင်မှုခံယူသူများကသာစာဝှက်ပြီးစာဝှက်ဖြင့်စာဝှက်ထားပြီးစာဝှက်ဖြင့်စာဝှက်ထားပါသည်။
သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှသင်၏ဖိုင်များကို upload, သိုလှောင်ခြင်း, သို့မဟုတ်မည်သည့် device ကိုမဆိုမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆိုဖိုင်များကိုအချိန်မဆိုဖျက်ပါ။ သင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုမျှဝေပါ။ စာဝှက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုသည်မှာသင်၏စကားဝှက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ရယူ. မရပါက၎င်းကိုမှတ်မိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း, သင်မှတ်မိရမည့် (သို့) သင်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသော့ကိုအရန်ကူးခြင်းမရှိပါက) သင်၏သိုလှောင်ထားသောဖိုင်များကိုလက်လှမ်းမီပါလိမ့်မည်။
End-end user-end encrypted Mega Video Chat သည်စုစုပေါင်း privacy ကိုခွင့်ပြုထားပြီး 2016 ခုနှစ်မှစ. browser မှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအထိတိုးချဲ့ထားပြီး, အသုံးပြုသူများသည် mega cloud drive မှ chats မှဖိုင်များကိုအလွယ်တကူထည့်နိုင်သည်။
Mega သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောအကန့်အသတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောအစီအစဉ်များအတွက်ရက်ရောခြင်း 20 ကိုအခမဲ့သိုလှောင်ပေးသည်။ BR> PRO LIME SUBSIRGSIO - တစ်လလျှင် 4.99 ယူနစ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်လျှင် 49.99.99.99 ယူရို 400 GB သိုလှောင်မှုနေရာနှင့်တစ်လလျှင် TB သို့မဟုတ် TB subscription: တစ်လလျှင် 99.99 € 99.99 € 99.99 € တစ်လလျှင်သိုလှောင်မှုနေရာနှင့်2တီဘီရောဂါ2တီရှပ်ရှင်။
PRO II Subsion: 19.99 ယူရို 1999.99 ယူရို 2999999999999999999999999999999999999999999 tb ကိုပေးထားသည်။ Br> Pro III Subscription: တစ်လလျှင် 29.99 ယူရို 29.99 ယူရို 299.99 ယူရို 169999999999999999999999999999999999999 tb 16 tb 16 tb 16 tb 16 tb 16 tb ကို 16 တီဘီရောဂါအသစ်ကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသည် ရွေးချယ်သောကန ဦး ကာလအဖြစ်။ သင်၏ subscription များကိုစီမံရန်သင်၏ဟန်းဆက်ပေါ်ရှိ Play Store icon ကိုနှိပ်ပြီးသင်၏ဟန်းဆက်ရှိသင်၏ Google ID ကိုနှိပ်ပါ (သင်မပြုလုပ်သေးပါက) ကိုနှိပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ subscription ကိုစီမံနိုင်လိမ့်မည်။
rownternal_storage -> Mega မှသင်၏ device မှသင်၏ device မှ mega မှ upload လုပ်ပါ သင်၏ဓါတ်ပုံများကို Mega သို့တင်ပါ။ Read_contacts -> Read_contacts - Record_audio & Capture_video_video_louttput (MIGA နှင့် Capture_Video) - Mega သည် Encrypted aut encrypted audio / video calls
သုံးစွဲသူများကို Mega စနစ်တွင်ယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ရန် client-side code များအားလုံးကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်လုံခြုံရေးသုတေသီများသည်စာဝှက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၏ကုဒ်သည် https://github.com/meganz/android
ပိုမိုသိရှိရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဝေသို့ (
ဘာအသစ်လဲ MEGA 5.1.1 (411)
How MEGADYNE MEGA SOFT Patient Return Electrode Works | ETHICON
Megasoft Limited. Share Full Analysis & Fundamental
MEGADYNE MEGA SOFT Patient Return Electrode Features and Benefits | ETHICON
MEGASOFT, PEARL POLY को Upper Circuit मैं Lock कर दिया पैसा छापने का वक्त आ गया?
Vivek Rana Stocks
Surgical Prep Made Easy with MEGADYNE MEGA SOFT | ETHICON
MEGA 5.1 (409)
MEGA 5.0.1 (407)
MEGA 5.0 (406)
Shane Min Kha